CERN: tekinoroji yekutsanangudza huwandu hwezvakaitika | Linux Vakapindwa muropa
CERN: tekinoroji yekutsanangura huwandu hwezviitiko
Isaac | | Kugoverwa, Misangano / Zviitiko / Hurukuro, Noticias
CERNIEuropean Organisation yeNuclear Research, kana kuti cathedral yesainzi sekudanwa kwainoitwa nevamwe, ndiyo murabhoritari yakakura kwazvo uye yepamberi panyama iripo. Nzvimbo hombe yepasi pevhu isingangounze chete masayendisiti akanakisa kubva kunyika dzakasiyana dzeEurope, asi zvakare ine tekinoroji inoshamisa yekutsvaga kwefizikisi.
Sezvaunenge uchitoziva mune zvimwe zvinyorwa zveLxA, ivo vanoshandisa wega kugovera kudana CCentOS, yaimbova Scientific Linux. Iyi distro ndeye CentOS distro ine mashoma shanduko. Uye zvakare, vane imwe yemasimba makuru kwazvo muEurope.
Gore rakapera, uyu supercomputer akawedzeredzwa kuita nzvimbo yedata iri mukutarisira kugadzirisa data rezviedzo zvakaitwa imomo mu LHC (Yakakura Hadron Collider) kana Yakakura Hadron Collider, iyo inowedzera yekuwedzera iyo yavanotsvaga nayo. Iyo LHC iringi hombe yemakiromita makumi maviri neshanu pasi pevhu reSwitzerland, iine magineti ane simba kwazvo anokwenenzvera anokwanisa kumisikidza iwo mairi uye ichivaita kuti varoverane kuitira, kuburikidza nhevedzano yema sensors, kuti vakwanise kuferefeta nyaya. Muchokwadi, zvinhu zvikuru zvakawanikwa ipapo, senge 27 Higgs Boson iyo yaive yakakosha Mubayiro weNobel.
Kunyanya, vakagadzirira komputa huru ne AMD EPYC 2nd Gen microprocessors, iyo EPYC 7742. Zviuru zvese zvemachipisi zvichakwanisa kuongorora iyo data yakaunganidzwa nema sensors mu kubonderana kwese (Kune makumi mana eTB / s dhata dzinofambiswa dzinofanirwa kuchengetwa ipapo nekuongororwa.)
Uye zvakare, zvirokwazvo iwe unoziva kuti CERN yakapa zviuru makumi maviri emamiriyoni euros ekudyara kwechizvarwa chechipiri cheanokurumidza. Ichave iyo FCC (Yemberi Circular Collider), ingangoita kakapetwa kanokwana kupfuura iyo yazvino LHC, ndiko kuti, ingangoita zana remakiromita erin'i uye katanhatu rine simba. Izvi zvinoitirwa kuita zvinoshamisira zvitsva zveremangwana revanhu.
Zvakanaka, ikozvino CERN yawedzera zvese izvo neine chaiyo arsenal yehunyanzvi kutsanangura iyo huwandu hwezviitiko. Kukurudzira kune ino fizikisi inonakidza ichaunza zvinhu zvikuru kupasi, zvimwe zvisingafungidzike nehunyanzvi hwazvino. Uye ivo vanoda kuve pamafungu echimurenga chechipiri chequanum mechanics uye kwete kusiiwa kumashure.
Semuenzaniso, pakati pezvinhu zvinonakidza zvichaitwa kuve kubata antimatter particles kuburikidza nemusungo AEGIS IT. Nenzira iyi, zvichave zvichikwanisika kuongorora zvakasikwa zvakasungwa zvemaphotoni kubva mukuparadzwa kwema positron. Uye izvi zvichave nekukanganisa kwakanangana paminda senge quantum komputa kana iro simba chikamu ... uye funga izvo kuseri kwekufambira mberi uku kune yakavhurika sosi zvinogutsa kwazvo ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » CERN: tekinoroji yekutsanangura huwandu hwezviitiko
Zvimwe zvishandiso zvevamabhizimusi vanoda yakavhurika sosi
Iwo ekupedzisira maratidziro eOpenCL 3.0 atoburitswa